Pixel 4 agaghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị na nkwụsị a | Gam akporosis
Pixel 4 ka edere na onyonyo iji gosipụta atụmatụ ya na oke bezel dị elu
Foto nke Pixel 4 ka agbapụ taa ebe a na-ezighi ya na imewe ahụ ga-alaghachi na ụkpụrụ nke afọ ole na ole gara aga. Bịanụ, ọ dị ka Nexus 5 nke nwere oke elu ahụ na nke ahụ ga-eju anyị anya n'ụzọ nke ekwentị a na-aga.
Ọ bụrụ na anyị atụnyere ya ka ọmarịcha atụmatụ nke Note10 +, enwere otutu uzo, karisia ma ọ bụrụ na i nweela ụfọdụ ekwentị dị elu nke afọ ole na ole gara aga na mpempe akwụkwọ ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-na flat, ị ga-ọkacha mmasị gị ekwentị ebe a.
Ma eleghị anya, ha chọrọ ịgbake a ogbe nke gara aga ụdị na-uru nke price ya mere laghachi na abụba ahụ dị elu n’elu; Ọ bụrụ na Pixel 3 abụworị egwuregwu maka nnukwu ọkwa ya, ugbu a anyị amaghị ihe ịtụ anya na Pixel 4.
Ma ọ bụrụ na anyị na-aga azụ aa ntị na nnukwu oghere nke igwefoto ga-erute Pixel 4. Omume nke anyị na-ahụ na ekwentị ndị ọzọ, dị ka ọ ga-eme Huawei ọhụrụ, nke ahụ na-anwa ọdịiche nke onwe ya site na ịdị mma nke ụdị ndị ọzọ ị nọ na nhazi kachasị ewu ewu; lee anya ọkọlọtọ abụọ ewepụtara site na Samsung afọ a.
Eziokwu ahụ O yiri anyị ihe ijuanya na nhazi nke Pixel 4 bụrụ ihe dị mfe ma dịkwa egwu. Ka anyị nwee olile anya na foto sọftụwia na-echekwa egwuregwu ahụ ma bụrụkwa ihe ngọpụ iji nweta ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị, amaghị m ihe ziri ezi anyị ga-agwa onye ọrụ ibe anyị na anyị azụrụ ekwentị a na 2015 ...
Anyị ga-amasị na ihe oyiyi a bụ mkpokọta adịgboroja na ihe a ga-ehihi na-aghọ asịrị nkịtị nọrọ n’ebe ahụ. Anyị ga-ahụ etu ihe si aga n’izuụka ndị na-abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Pixel 4 ka edere na onyonyo iji gosipụta atụmatụ ya na oke bezel dị elu
Galaxy S7 na S7 Edge enweelarị mmelite nche nke August dị
OPPO Reno2 Z na Reno2 F: middị ọhụrụ dị n'etiti